Tibet - Wikipedia
Tibetan: བོད, Lhasa dialect IPA: / pʰøː˨˧˩ /; Shiinaha: 西藏; Pinyin: Xīzàng) waa gobol taariikheed oo ka kooban meelo badan oo ka mid ah Meelaha Tibetan ee gudaha Aasiyada Aasiya. Waa waddanka dhaqanka ee dadka Tibetan iyo sidoo kale qaar ka mid ah kooxaha qowmiyadaha sida Monpa, Tamang, Qiang, Sherpa, iyo Lhoba iyo hadda waxay ku nool yihiin dad badan oo ka tirsan Hanjiga Shiinaha iyo Hui. Tibet waa gobolka ugu sareeya ee dunida, iyadoo celcelis ahaan sarreeya 4,900 mitir (16,000 ft). Weynaanta ugu sareysa ee Tibet waa Mount Everest, buuraha ugu sareeya dunida, oo kor u kacda 8,848 m (29,029 ft) oo ka sarreeya heerka badda.
Boqortooyada Tibetan waxay soo baxday qarnigii 7aad, laakiin xilligii dayrta ee boqortooyadii gobolka ee ugu dambaysay waxay u qaybsantay dhulal kala duwan. Inta badan galbeedka iyo bartamaha Tibet (Ü-Tsang) waxaa badanaa ugu yaraan la magacaabay iyadoo hoos imanaysa taxane dowlado Tibet ah oo ku yaalla Lhasa, Shigatse, ama meelo u dhow; dawladahani waxay ahaayeen waqtiyo kala duwan oo hoos yimaada Mongol iyo Shiinaha. Sidaa awgeed, Tibet waxa uu ahaa munaasabadda Mucaaradka iyo hoggaamiyayaashii Shiinaha ee ku sugnaa Nanjing iyo Beijing, oo leh madaxbannaan macquul ah oo loo siiyay hoggaamiyayaasha Tibetan. Gobollada bari ee Kham iyo Amdo waxay inta badan joogaan nidaam siyaasadeed oo baahsan, oo u kala qaybsan tiro badan oo ka mid ah maamulayaasha yaryar iyo kooxaha qabaa'ilka, iyada oo inta badan ay si toos ah hoos ugu dhacdo xukunka Shiinaha ka dib Dagaalkii Chamdo; badi degaankan ayaa ugu dambeyntii lagu daray gobollada Shiinaha ee Sichuan iyo Qinghai. Xuduudaha hadda ee Tibet ayaa guud ahaan lagu aasaasay qarnigii 18aad. 
Ka dib kacdoonka Xinhai ee ka dhanka ah xayiraadda Qing ee 1912, askariga Qing ayaa hubka laga saaray oo ka baxsaday aagga Tibet (Ü-Tsang). Gobolka ayaa markii dambe ku dhawaaqay xorniyaddeedii 1913-kii iyada oo aan aqoonsan xukuumadda Shiinaha ee soo socota.  Markii dambe, Lhasa waxay gacanta ku haysay qaybta galbeedka ee Xikang, Shiinaha. Gobolku wuxuu ku sugnaaday madax-bannaanidii 1951-kii, ka dib Dagaalkii Chamdo, Tibet waxa uu ku biiray Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha, dawlad hore oo Tibetan ah ayaa la baabi'iyey 1959-kii kadib markii uu dhacay kacdoonkii fashilmay  Maanta, Shiinaha waxay xukumaan galbeedka iyo bartamaha Tibet sida gobolka Tibet-ga gobolka halka bariga bari ay hadda yihiin kuwo inta badan degmooyinka gobollada hoose ee Sichuan, Qinghai iyo gobollada kale ee deriska ah. Waxaa jira xiisado la xiriira xaaladda siyaasadeed ee Tibet  iyo kooxaha mucaaradka ah ee ka shaqeeya dibedda. Dhaqdhaqaaqayaasha Tibetan ee Tibet ayaa la soo wariyay in la xiray ama la jirdilay. 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Tibet&oldid=197873"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 20 Diseembar 2019, marka ee eheed 06:51.